Mkpado ndị a ma ama na dị mkpa iji kwado na Ecommerce | Martech Zone
Iji kesaa, tụọ ma bulie mgbanwe ọ bụla iji melite nsonaazụ ecommerce gị, ijide data metụtara onye ọrụ ọ bụla yana omume dị oke egwu. Nweghị ike imeziwanye ihe ị na-atụghị. Kasị njọ, ọ bụrụ na ị machibido ihe ị tụrụ, ị nwere ike ịme mkpebi iji mebie ahịa gị n'ịntanetị.
As Softrylic, onye na-ere ihe na-anọpụ iche na data na nchịkọta akụkọ na-ekwu, njikwa njikwa na-eje ozi Digital Marketers 'yana nghọta dị elu banyere nsuso ndị ọbịa, ịkpa agwa omume, ntugharị, nhazi na nnabata data.
Ntucha bụ ebe niile na ntinye ederede yana ịdebe data metụtara saịtị gị. Nchịkọta nchịkọta na-ejide ọtụtụ mkpado site na ntinye ntọala. Ọ gwụla ma ị jikọtara data iji jide gị na ikpo okwu e-commerce gị, agbanyeghị, ọtụtụ mkpado ndị dị oke egwu na-efu.
Ihe omuma ihe omuma a site na Softcrylic na-akowa ihe nkpado ikwesiri itinye na gi e-commerce peeji nke, peeji ịzụ ahịa, ibe ngwaahịa, ibe ụgbọ, ibe ndenye ọpụpụ, na ibe nkwenye.
Ha na-enyekwa usoro kachasị mma na ntinye ntinye, gụnyere:
Nyochaa Tag Management - Nyochaa Tag bụ nyocha oge, nhazi usoro yana mmesi obi ike na akpaghị aka nke mkpado iji chọpụta nke ọma ma dozie mkpado agbajiri agbawa, omume ịgba ọkụ, ugboro ole, izi ezi data na ịchapụ data.
Data Njikwa-Akpado Tag Management - Imejuputa nke oma “Data Layer” na-enyere Tag Management Systems iji nweta ikike kachasi, mgbanwe, na ntụkwasị obi na mgbanwe data gafee nyiwe na usoro iwu eji eme ihe banyere mkpado.
Guzozie Piggybacking Tags - Piggybacking bụ mma agha ihu abụọ. Ọ na-enyere aka na mma retargeting. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma, ọ nwere ike ịbawanye oge ibu peeji, mebie nchebe data ma mebie aha aha.
Nke a bụ infographic. Nwere ike ibudata ya PDF site na Softcrylic.
Tags: mkpado nchịkọtapeeji nke ụgbọpeeji ndenye ọpụpụpeeji nke nkwenyee-commerce peeji nkee-azụmahịa na mkpadoMkpado ecommerceecommerce na mkpadoinfographicndepụta ngwaahịapeeji ịzụ ahịanzuzunyochaaNyochaa mkpadonyochaa njikwa mkpadoịkpadotagsdaalụ peejina ebe nrụọrụ weebụ na mkpado